IVivo X27 kunye neVivo X27 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
IVivo X27 kunye neX27 Pro zisiwe ngokusemthethweni
Kwezi veki bekukho ukuvuza okuthile malunga neVivo X27 ProImodeli entsha yodidi oluphakathi lwegama laseTshayina. Kuzo ungayibona loo nto isixhobo besinokusebenzisa ikhamera yangaphambili enokurhoxiswa, into esiyibonayo kakhulu kwezi nyanga. Okokugqibela, le fowuni sele ihanjisiwe. Kananjalo ayifikanga yodwa, kuba iza neVivo X27.
Iimodeli ezimbini ezintsha zoluhlu oluphakathi zohlobo lweTshayina. Inyani yile yokuba le Vivo X27 kunye neVivo X27 Pro baneenkalo ezininzi ezifanayo. Nangona ezinye iinkcukacha zayo zahlukile, njengoko unokulindela. Kodwa zibonisiwe njengezinto ezimbini ezinomdla phakathi kuluhlu oluphakathi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, kukubheja okucacileyo kwicala lophawu lwaseTshayina ukugcina ubukho obulungileyo kweli candelo. Uyaphila ngoku uphawu yesibini ethengiswa China. Ukongeza, banethemba lokuba baya kukwazi ukuqhubela phambili kwiimarike ezintsha. Iimodeli ezinje ngezi Vivo X27 Pro kunye neVivo X27 ziluncedo olufanelekileyo koku.
1 Ukucaciswa kweVivo X27 kunye neVivo X27 Pro
Ukucaciswa kweVivo X27 kunye neVivo X27 Pro
Sikushiya netafile apho ungabona khona iinkcukacha zeemodeli ezimbini. Njengoko besesitshilo, banezinto ezimbalwa ezifanayo ezifanayo. Ukuze ukwazi ukubona yonke imiba eqhelekileyo kunye numahluko esiwufumanayo kwezi zimbini zeemodeli eziphakathi kuluhlu lophawu:
ISIKHUMBUZO I-6,39-intshi ye-Super AMOLED ene-FullHD + Resolution (2.340 × 1.080) kunye ne-19,5: 9 ratio I-6,7-intshi Super AMOLED enesisombululo se-FullHD + (2.340 × 1.080) kunye ne-20,5: 9 ratio
INKQUBO ISpapdragon 675 / Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 710
i-ram 8 GB 8 GB
ISIKHUMBUZO SANGAPHAKATHI I-128 GB / 256 GB 256 GB
IINKCUKACHA Ngasemva: 48MP + 13MP + 5MP
Ngaphambili: 16 MP
Ngasemva: 48MP + 13MP + 5MP
Ngaphambili: 32 MP
SOFTWARE I-Android 9 Pie ene-Funtouch OS I-Android 9 Pie ene-Funtouch OS
IBATTERI I-4.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo I-4.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
ABANYE Iscreen sensor yeminwe Iscreen sensor yeminwe, NFC,
UQHAGAMSHELWANO I-Wifi 802.11 a / c, iBluetooth, iGPS, I-Wifi 802.11 a / c, iBluetooth, GPS ,, 3,5 mm jack
Kwimeko yeVivo X27, isimanga sophawu ngokusungula iinguqulelo ezimbini zaso. Ukucaciswa kuhlala kunjalo kwimeko zombini, kodwa sifumana iinguqulelo ezimbini kuxhomekeke kwiprosesa esetyenzisiweyo. Kwenye yazo sine-Snapdragon 675 processor, enye yezona zinto zamva nje kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Uhlobo lwesibini lusebenzisa i-Snapdragon 710, iprosesa ngokugqwesa ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu.
Kwelinye icala sineVivo X27 Pro, esebenzisa iSnapdragon 710. Kule meko sinenguqulo enye yefowuni, ikwakho nendibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kuyo. Iimpawu phakathi kwezi zixhobo zimbini zinemiba emininzi efanayo, njengoko ubona.
Basebenzisa iikhamera ezifanayo ngasemva kuwo omabini la matyala, ubungakanani bebhetri efanayo. I-8 GB ye-RAM nayo igcinwa kwiimodeli ezimbini, Ngaphandle kwamathandabuzo ithembisa intsebenzo elungileyo kakhulu, ithathela ingqalelo ukuba ziimodeli ngaphakathi kuluhlu oluphakathi. Umahluko ophambili bubungakanani, kuba iVivo X27 Pro inkulu ngakumbi kunenye imodeli, enesikrini esizi-intshi ezi-6,7, ngokungathandabuzekiyo esenza ukuba ibe sesinye sezona zikhulu kakhulu phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android.
Okwangoku, kukusungulwa kweefowuni ezimbini kuphela okuqinisekisiweyo e-China. Asazi nokuba bazakwaziswa ngaphandle kwelizwe. Yinto esinethemba lokuyazi kungekudala, kodwa akukho xesha linikiweyo idatha malunga noku. Ngethamsanqa, sinamaxabiso enguqulelo nganye yezi zixhobo zimbini:
Inguqulelo yeVivo X27 ene-Snapdragon 675 iza ngexabiso le-3.198 yuan (420 euro to change)
IVivo X27 ene-Snapdragon 710 izakuxabisa i-3.598 yuan (malunga ne-470 euro ukutshintsha)
IVivo X27 Pro isungulwe ngexabiso le-3.998 yuan (525 euros to change)
Ngokuphathelele imibala, kujongeka ngathi luhlaza okwesibhakabhaka kunye nepinki yimibala yokuqala eqinisekisiweyo yezi modeli. Nangona kweminye imithombo yeendaba kusithiwa kukwakho nombala oluhlaza kubo. Kodwa okwangoku kuyakubakho imibala emibini ngokuqinisekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » IVivo X27 kunye neX27 Pro zisiwe ngokusemthethweni
I-Instagram Checkout ifikelela kwinethiwekhi yoluntu ukuqhuba inkqubo yokuthenga ngaphandle kokushiya usetyenziso
Imbeko 10i: Uluhlu oluphakathi lwebrand entsha ngoku lusemthethweni